N'ogbe N'ogbe njem Manufacturer na soplaya | N'oge
Mostzọ kachasị ọnụ ahịa iji napụta nnukwu ọnụọgụ. Site na iji mmekọrịta anyị siri ike na ogologo oge, GZ Ontime na-enye gị mgbanwe mgbanwe nke mmiri na ntụkwasị obi ....
Mostzọ kachasị ọnụ ahịa iji napụta nnukwu ọnụọgụ.
Site na iji mmekọrịta anyị dị ogologo na nke ogologo oge, GZ Ontime na-enye gị oke osimiri na-agbanwe agbanwe, nke a pụrụ ịtụkwasị obi ma nwee nchebe ibuazịza ya. Ndị ahịa ji amamịghe anyị mara na ibufe ụgbọ mmiri mba ụwa gafere na ntanetị zuru ụwa ọnụ nke gbasara mba na mpaghara iri anọ na isii. Ha ji ike ijikọ na ọrụ ndị ọzọ dị ka ibugharị ikuku, multimodalnjem.
Karịa nke a, ndị ahịa anyị maara na anyị ghọtara ụwa site n'ọnọdụ ha, ma na-arụ ọrụ iji kwado ha na azụmaahịa ha. Echiche ahụ na-agafe ihe niile anyị na-eme, site na ịchọta usoro kachasị mma maka mbupu na ịhọrọ ụzọ kachasị mma isi hazie ya; nkewa ma ọ bụ ịkekọrịta ibu; ijikọta ọrụ ndị ọzọ bara uru; ma na-enye ọrụ a pụrụ ịdabere na ya mgbe niile. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe - anyị anaghị ekwe ka ndị ahịa daa.
Ebube zuru ezu (FCL)
Mmekọrịta anyị ogologo oge na ọtụtụ ndị na-ebu ụgbọelu pụtara na anyị kwesịrị idobe iji nweta ohere na ụgbọ mmiri na ịchọta usoro ga-arụ ọrụ, yana ọnụego asọmpi. Ọrụ FCL anyị na-akwado sistemụ nrụọrụ nyocha na-enyere gị aka inweta ọhụhụ nke ọnọdụ mbupu gị.
Anyị na-enye ohere ịnweta FCL sailings adịchaghị na-arụ ọrụ na ike nke gị ọkọnọ yinye. Site na ọrụ ndị dị n'etiti ụbọchị 10 ruo 50, anyị enweela ndị otu na mbido na njedebe nke nwere ike inyere gị aka ịkwalite mbupu nke ọ bụla maka ụgwọ, ụzọ, ma ọ bụ oge njem.
Ndị A Pụrụ abletụkwasị Obi
Anyị na ndị ọrụ a tụkwasịrị obi na ndị tụkwasịrị obi na-ebu nkwekọrịta iji hụ na ụgbọ mmiri gị na-ebugharị n'oge, dị ka ahaziri.
Anyị na-enye ọrụ adịchaghị na ụgbọ mmiri si China, iji hụ na ngwa ngwa ngwa ngwa rutere ebe ọ na-aga n'oge, ọbụlagodi mgbe oke ahụ karịrị.
Ihe na-erughị ibu Container (LCL)
Ọrụ anyị na-erughị akpa ibu na-enye gị mgbanwe iji gboo mkpa gị dị iche iche, nke a pụrụ ịdabere na ya na n'okpuru njikwa. Inye ọrụ nkwado nke onwe anyị, ma ọ bụ Multi-Country Consolidation Services (MCCS) maka mbupu dị mgbagwoju anya, na-akwado gị na ijikwa ụgwọ ibu na oge mbupu. Anyị LCL ọrụ na-enwekwukwa site online track na Chọpụta ọrụ, na-enyere gị aka ịchịkwa Mbupu visibiliti.
Anyị na-eme ka Chain Chain dị mma
Netwọk LCL anyị na-enye njikọta na enweghị atụ n'ofe ụzọ ụgbọ mmiri buru ibu, ma na-enyere ndị ahịa anyị aka ịkwalite maka isi obodo na-arụ ọrụ site na ịchọta ngwaahịa ha chọrọ.
Njikwa Ka Mma maka Mgbanwe Agbanwe Agbanwe
Anyị na-enyocha teknụzụ ma na-eme ka usoro mbupu ahụ niile ngwa ngwa. Site na ịkọwapụta ozi nke ndị ahịa gaa na ịbupu mbupu, anyị na-ahụ na ọnụọgụ nyocha nke ndị ọrụ belatara nke ukwuu.
Mgbe ị na-ahọrọ anyị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọrọ karịa na ọrụ mmiri, anyị ga-aga n'elu na gafee iji hazie nnyefe zuru oke. Anyị na-eme nke ọ bụla iji mee nke gị dumnjem Ahụmahụ iji mezuo atụmanya gị.
1.DDP (Elikwụ utygwọ Ọrụ Pagwọ), DDU (Akwụghị utygwọ Ọrụ)
3.Ngụ akwụkwọ na tupu mbupu atụmatụ
4. Cargo mkpuchi
6.Inland njem ndokwa
7.Ntuziaka na nyocha.
Shippinggbọ mmiri mba ofesi nwere ike ịdị mgbagwoju anya gbasara akwụkwọ, ụkpụrụ, ịnye ọnụahịa na ịgbagharị. Anyị nwere ọfụma na ịme ka usoro a dị mfe, na-ahapụ gị inwe nchekasị na afọ ojuju.
Ahụmịhe zuru oke anyị na nka anyị na ụgbọ mmiri, tinyere ọrụ ndị ahịa anyị pụrụ iche na-eme ka anyị nwee obi ike n'eziokwu na anyị nwere ike izute mkpa gị niile.
Egbula nzuzu. Ọnụ ego dị oke ala ma ọ bụ onyinye na-adọrọ adọrọ na-ezokarị ihe ijuanya na-adịghị mma. Oge GZ ga - abụ nhọrọ kachasị mma maka ibugharị ngwaahịa gị n'oké osimiri.
Nke gara aga: Nyefee FedEx Ọrụ Site na China gaa Fed Ex Ship DHL International Shipping Rates Philippines
Osote: Dropshipping gị n'ụlọnga